Dowladda Tanzania oo beenisay in Madaxweyne John Magufuli uu ku dhacay xanuunka Corona - Jowhar somali news leader
Home NEWS Dowladda Tanzania oo beenisay in Madaxweyne John Magufuli uu ku dhacay xanuunka...
Dowladda Tanzania oo beenisay in Madaxweyne John Magufuli uu ku dhacay xanuunka Corona
Madaxweynaha Tansaaniya John Magufuli ayaa caafimaadkiisu wanaagsan yahay u si caadi ah u shaqeynayaa ka dib markii Saraakiil ka tirsan Madaxtooyadda in uu haleelay cudurka Karoonaha oo lagu daweynaayo dalka Hindiya.
Magufuli waa 61, sano jir waa shakiga ugu caansan Afrika ee sida weyn ugu soo horjeedda Jiritaanka coronavirus. Lama arkin meel fagaare ah tan iyo 27-kii Febraayo.
Hogaamiyaha mucaaradka Tansaaniya Tundu Lissu oo u ambabaxay dalka Belguim kadib markii uu muran ka keenay guuldaradii ka soo gaadhay doorashadii sanadkii hore Magufuli, ayaa sheegay in madaxweynaha loo qaaday isbitaalka gaarka loo leeyahay ee Nairobi ee ku yaal dalka ay jaarka yihiin ee Kenya ka dibna loo qaaday dalka Hindiya isagoo kooma ku jira.
Si kastaba ha noqotee, ra’iisul wasaare Kassim Majaliwa ayaa beeniyay taas, isaga oo ku eedeeyay sheekada “nacayb” Tansaaniyaanka ku nool dibedda.
“Tansaaniyaanka waa inay nabad ahaadaan. Madaxweynahaaga waa wuu caafimaad qabaa, wuuna dadaalayaa, ”ayuu ku yiri khudbad uu jeediyay salaaddii Jimcaha ka dib koonfurta gobolka Njobe. “In la faafiyo warar xan ah oo sheegaya inuu xanuunsan yahay waa natiijo nacayb ah.”
Wasiirka warfaafinta Tansaaniya iyo wasiirka cadaalada ayaa todobaadkan ugu hanjabay kuwa faafinaya wararka xanta ah inay la gali doonaan waqti xabsi ah, iyagoo aan si toos ah uga hadlin waxyaabaha ay tabanayaan.
Previous articleThe UN Security Council demands the withdrawal of foreign troops, mercenaries from Libya
Next articleTurkiga oo ka hadlay khilaafka doorashada dalka Soomaaliya